Kabary fisaorana sy famaranan’ny mpangataka - Informations et Actualités sur Madagascar
Culture Education Kabary fisaorana sy famaranan’ny mpangataka
by Alpha world on 01 h 14 in Culture, Education
Tompokolahy sy tompokvavy!
Raha tsy miteny toa sosotra
Raha tsy mamaly toa tezitra
Atao ahoana tokoa mao ny hangina manoloana izany teninareo izany. Raha ny marina dia izahay no tokony hisaotra anareo satria nandom-baravarana izahay dia novohana, nangataka ny ho tokantrano dia nomena, ny resaka natao tamim-panajana sy fahendrena feno.
Tsy mba nataonareo toy ny voasary ivelan’ny saha izahay, na voaloboka ivelan’ny vohitra. Tsy nataonareo ho olon-kafa izahay, na ivelan'ny fianakaviana, fa nataonareo tena havana, ka nantsoinareo hanatrika izao andro malaza izao.
Tsy vitan'izany ihany, fa nisahirananareo, norosoanareo hanim-pitoloha, tsy kely velively ny nahandro naroso, fa tsy ny tana-manolotra no mahatsapa sy mankasitraka indrindra, tompoko.
Farany, indreo ianareo roa, ny dinam-pitiavana izay nataonareo teo anie, tsy hanao tahaka ny landim-boatavo, iolaka tsy irainjehy; tsy ho mena-mivadika tahaka ny andro ririnina, fa ho tahaka ny vary eny an-doharano, taninin'ny hainandro tsy mba malazo, tsofin'ny rivotra, tsy mba miraraka, rarafam-panala tsy ngoly.
Hisaraka isika tompoko, koa dia manao veloma mandram-pihaona.
Tsy haharay tanana anareo rehetra anefa izahay, ary torak'izany koa ianareo, fa dia havondrontsika amin'izy roa ny fifandraisan-tanana sy fifanaovam-beloma. Aorian'ny fanompoam-pivavahana famaranana, dia mangataka azy ireo hijoro eo am-baravarana horaisintsika tanana.
Veloma Tompokolahy, Soava Tompokovavy!
By Alpha world at 01 h 14